रोग के हो ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
रोग मानिसको सबभन्दा ठुलो सत्रु हो । कुनै रोग साधारण होलान ऊपचार् पाएमा निधान हुन सक्छ । कुनै रोग यती भयानक हुन्छ । जसले मानिसको सम्पूर्ण जायजेथा बेचेर ऊपचार् गरेर पनि बाँच्न सकिदैन । रोगी त मर्छनै परिवार समेत गरीबी र अभावमा बाच्नु परेको समाजमा प्रसस्त उदाहरण छन । मानिसका धेरै सत्रु हुन्छन । भोक, गरिबी, अभाव ,कुरिती ,कुसस्कार ,जातियता, अन्ध धार्मिक, दुसबिचार, दुस्चरित्र र अन्य समाजका हुने गलत बेबहार ,अपराधीहरु पनि मानिसका सत्रु हुन । सामाजिक बेब्स्था र असल राजनीति र नेता भएमा यि सबै सत्रुसँग लडन सकिन्छ । रोग एउटा यस्तो सत्रु हो । जसमाथि बिजय पाउन संसारका बीकसित राष्ट्रहरुले ठुलो लगानी गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन । यध्यपी धेरै रोगको आस्थायी भयपनी समाधान भएको छ । भोक , गरीबी र अभाब सँग त लडन सकिन्छ तर मानिसलाइ रोगसङ्ग लडन अती कठिन हुन्छ र हुदो रहेछ । मानव शरीर इश्वरले यस्तो बनाएको छ कि हजारौ बर्षासम्मको अध्ययनअले पनि जान्न सकिएको छैन । मानवमा लाग्ने रोगको बारेका अनुसन्धान गर्न हजारौं डाक्टर र बैज्ञानीक अनबरत रुपमा लागिरहेका छन । कुनै रोगको औषधी पत्ता लगाउन पाएको हुँदैन अर्को नयाँ रोगको उत्पती हुन्छ । ब्लड प्रेसर, पायल्स कब्जियत, दम, झाडा पखाला, ज्वरो, रुघा खोकी , मधुमेह, टी.बी. आदी रोग साधारण भईसके । जबकी यि रोगमा समेत अनुशासित रुपमा औषधी सेवन नगरे मान्छेको मृत्‍यु हुन सक्छ । तरपनी यि रोग साधारण भाईसके औशधी खाएपछी निको हुन्छ केही रोगलाई खाइरहन पर्छ । केही रोग य्स्ता पनि छन जुन उपचार् गरेपनी सन्च हुँदैन । मान्छे मर्छ् । क्यान्सर, एड्स, लिभर, किडनी । फोक्सो, मुटु आदी रोग लागेमा यमराजले नै बोलाएको मानिन्छ । हुनत मान्छे जन्मने बित्तिकै मर्ने बाचा लिएर आएको हुन्छ । हरेक मान्छेले मर्नु पर्दछ । मर्ने कुरामा सबभन्दा डराउने प्राणि नै मान्छे हो । किनभने मरेपछी आफु यो संसारमा रहदैन । उसले यो संसार भोग्न र देख्न पाउदैन । यो कुरो उसलाई ज्ञान छ । रोग के कारनले लाग्छ ? धरै मान्छेलाई थाहा छैन पनि । थाहा भएका मान्छेले पनि हेल्चेक्राइ गर्छन्। रोगको मुख्य श्रोत भनेको हाम्रो खाना हो । भोजन्को साथ्साथै मन सन्तुलन भएन भने धेरै रोगले शरीरमा डेरा जमाउछ । अर्को रोग लाग्नुको कारण शरीरमा दुसित पदार्थ जम्मा भैइ पेटमा कब्जियत हुने, बिभिन्न ग्रन्थिहरुको सन्तुलन बिग्रेर पनि हो । रोगको मुख्य श्रोत भनेको हाम्रो खाना हो । भोजन्को साथ्साथै मन सन्तुलन भएन भने धेरै रोगले शरीरमा डेरा जमाउछ । अर्को रोग लाग्नुको कारण शरीरमा दुसित पदार्थ जम्मा भैइ पेटमा कब्जियत हुने, बिभिन्न ग्रन्थिहरुको सन्तुलन बिग्रेर पनि हो। फोहरमैला र दुसित बातावरण ,कुपोशन्ले पनि धेरै रोग लाग्छ र मान्छेको मृत्‍यु हुन सक्छ । हामीले अज्ञानताबस शरीरलाई नोक्सान हुने खाना खाइरहेका छौ । थाहा भएका मान्छेले पनि हेल्चेक्राइ गरिरहेका छौ । जसको परिणाम स्वरुप ठुल्ठुला रोग निम्त्याइरहेका छौ । दुर्घटना र भवितब्यलाई छोड्ने हो भने, रोग नै मृत्‍युको बहाना हो। रोग लागेरै मान्छे मर्छ । मेरो मन्साए यतिमात्र हो |मान्छेले औशद आयु स्वास्थ्य भएर बाँच्न पर्छ र बाँच्न पाउनु पर्छ । कस्ट र पिडालाई कम् गर्न उपचार् गर्न पर्छ । रोग्को पिडा रोग लागेका मानिसले मात्र बुझ्न सक्छ । त्यो कस्ट र पिडा शब्दमा ब्यक्त गर्न सकिन्न । मान्छे पापसँग डराउनु पर्ने हो । कुकर्म सँग डराउनु पर्ने थियो । तर मान्छे पाप र कुकर्म गर्न डराउदैनन , मान्छे म्रुत्यु भन्ने बित्तिकै डराउछन । औशद आयु बाच्नको लागि आमाको कोखदेखी नै स्वास्थ्य हुनुपर्छ । कतिपय रोगहरु जेनेटिक हुन्छन । त्यो रोग आफ्ना शंतानमा बन्सानुगत सर्छ । त्यसलाई रोकथामा मात्र गर्ने हो